Lalao sy fampiharana 16 maimaim-poana ho an'ny haingana indrindra (25 Janoary) | Vaovao IPhone
Ao anatin'ny antsasaky ny herinandro fiasana dia hanome fifaliana vaovao ho antsika isika amin'ity lalao ity ary fampiharana maimaim-poana azonao atao izao ao amin'ny App Store ho an'ny fitaovanao iPhone, iPad ary iPod Touch. Toy ny isan'andro, dia hahita rindrambaiko sy lalao saika isan-karazany isika ary saika ny tsiro rehetra, ka ho hitanao fa ilay fampiharana izay manao izay ilainao fotsiny, na ilay lalao izay hampifaly anao mandritra ny dia ataonao bus na metro na eo am-piandrasana amin'ny filaharana tsy misy farany any amin'ny banky.
Fa ny zavatra tsy azonao hadinoina dia ireto fampiroboroboana manaraka ireto izay entinay aminao anio amin'ny Actualidad iPhone Fotoana voafetra. Midika izany fa tokony hitandrina tsara ianao hampidina ireo fampiharana sy lalao ireo. Tsarovy: "misintoma izao, mieritreritra ao aoriana." Fampiharana maimaim-poana izy ireo ka, raha tsy tianao izy ireo, raha tsy araka ny noeritreretinao azy ireo, hamafa azy ireo fotsiny amin'ny fitaovanao, ary voila!
1 Aza avela handositra ireo lalao sy fampiharana maimaimpoana ireo
1.1 Rune Gems
1.2 Rune Gems - Deluxe
1.3 Tiggly Story Maker: Manamboara Teny ary Raketo ny tantaranao manokana
1.4 Dokotera Tiggly
1.5 Mpiara-mihetsiketsika - Ny fanarahan-dia an'i Uber
1.6 PopMusic - Doka maimaimpoana maimaim-poana ho an'ny SoundCloud
1.7 Weather FX Pro - Orana eo noho eo, masoandro, avana, rahona, lanezy, kintana avy amin'i PhotoJus
1.8 BoomBox - Mpilalao mozika maimaim-poana ho an'ny SoundCloud
1.9 ezPDF Cup - PDF Clip sy Scrap
1.10 Fankalazana ao amin'ny Sarayi
1.11 Fandraisana fahalalana
1.12 ezPDF Reader: PDF Reader, Annotator & Form Filler
1.13 ezPDF Reader: PDF Reader, Annotator & Form - iPad
1.14 ezPDF CLEAR: Digital Textbook & Workbook
1.15 Anglisy ho an'ny hetsika isan'andro
1.16 Ny anglisy ilainao ho an'ny birao
Aza avela handositra ireo lalao sy fampiharana maimaimpoana ireo
Rune Gems Izy io dia manana vidiny 1,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Rune Gems Deluxe Izy io dia manana vidiny 2,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Tiggly Story Maker: Manamboara Teny ary Raketo ny tantaranao manokana
Tiggly Story Maker Izy io dia manana vidiny 2,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Dokotera Tiggly Izy io dia manana vidiny 2,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Mpiara-mihetsiketsika - Ny fanarahan-dia an'i Uber
Mpiara-mihetsiketsika - Ny fanarahan-dia an'i Uber Izy io dia manana vidiny 0,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
PopMusic - Doka maimaimpoana maimaim-poana ho an'ny SoundCloud
PopMusic - Doka maimaimpoana maimaim-poana ho an'ny SoundCloud Izy io dia manana vidiny 6,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Weather FX Pro - Orana eo noho eo, masoandro, avana, rahona, lanezy, kintana avy amin'i PhotoJus
Weather FX Pro Izy io dia manana vidiny 1,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
BoomBox - Mpilalao mozika maimaim-poana ho an'ny SoundCloud
BoomBox - Mpilalao mozika maimaim-poana ho an'ny SoundCloud Izy io dia manana vidiny 5,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
ezPDF Cup - PDF Clip sy Scrap
ezPDF Cup - PDF Clip sy Scrap Izy io dia manana vidiny 2,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Fankalazana ao amin'ny Sarayi
Fankalazana ao amin'ny Sarayi Izy io dia manana vidiny 9,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Fandraisana fahalalana Izy io dia manana vidiny 1,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
ezPDF Mpamaky Izy io dia manana vidiny 1,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
ezPDF Reader: PDF Reader, Annotator & Form - iPad
ezPDF Reader ho an'ny iPad Izy io dia manana vidiny 3,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
ezPDF Mazava Izy io dia manana vidiny 9,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Anglisy ho an'ny hetsika isan'andro
Anglisy ho an'ny hetsika isan'andro Izy io dia manana vidiny 2,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Ny anglisy ilainao ho an'ny birao
Ny anglisy ilainao ho an'ny birao Izy io dia manana vidiny 2,99 euro mahazatra, izao, azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
FAMPITANDREMANA: Tadidiko fa ny hany tokana azontsika antoka dia ireo valiny sy fampiroboroboana ireo manan-kery tamin'ny fotoana namoahanay ity lahatsoratra ity; Tolotra mandritra ny fotoana voafetra izy ireo ary tsy afaka manome toky izahay fa haharitra mandritra ny fotoana lava, ary tsy fantatray koa hoe rahoviana izy ireo no lany daty satria tsy ampitan'ny mpandrindra izany matetika. Noho izany, araraoty ny fotoana ary raha liana amin'ny iray amin'ireo rindranasa na lalao maimaim-poana ireo ianao dia mahazoa haingana alohan'ny lany ny tolotra. Ary raha tsy tonga ara-potoana ianao dia aza manahy. Rahampitso!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao sy fampiharana 16 maimaim-poana ho an'ny haingana indrindra (25 Janoary)
Fandaharana sy lalao jono daholo!
Tsara ny mampahafantatra fa mandeha ny rindranasa. Apetraka apetraka….